Ntuziaka maka ịtụ B2B Ahịa Marketingga nke Ọma | Martech Zone
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ịhazi ma zụlite usoro usoro azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ha. Ihe omuma ihe omuma a sitere na g2m solutions bu nchikota nke uzo ahia B2B nke ha na akowaputara na nke ha. N'iji ahia ROI ebook.
Usoro SMART na Nchịkọta Ahịa
SMART bu okwu acronym maka uzo emere ka ahia obula:
Shoputa Ihe I choro
Analyze Key Nchoputa
Ntọala nke B2B Mgbanwe Mgbasa Ozi
Site na mbata nke ahịa ọ bụla, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla bịara na saịtị gị na-abịarute, na-agbanwe ma gbanwee site na ụzọ dị iche. Igwe mmiri nke ọdịnala na nchekwa data adịghị emetụta na ọkwa micro ọzọ, mana na ọkwa oke nchịkọta na usoro ihe nlekota oru nchikota onu ogugu di nma. Zọ atọ a bụ TOFU, MOFU na BOFU - lee ka esi kọwaa nke ọ bụla:
TOFU (Top of Funnel) - Ndị a bụ ndị ọbịa na mbọ ahịa ị na-agba nke na-abụkarị na nyocha nke usoro ịzụta. Ebumnuche ahịa ebe a bụ iji hụ na achọtara ika, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ebe atụmanya na-eme nchọpụta… na ọchụchọ, mmekọrịta, saịtị nyocha, akwụkwọ ndekọ aha na saịtị saịtị ndị ọzọ dị mkpa.
MOFU (Middle of Funnel) - Ndị a bụ ndị na-achọ ịzụ ahịa, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ gị. Ha erebeghi ugbu a - mana ha achọpụtala gị na nyocha ha ma ha nwere ike kpebie ịmekọrịta gị. Ndị a bụ ndị ọbịa ị chọrọ itinye nnukwu oku na-arụ ọrụ na ọdịda peeji nke iji mee ka ha bamikwuo n'ime oge ịzụta. Ahịa email bụ etiti maka ọkwa a.
BOFU (Ala nke mkpịsị ụkwụ) - Ndị a bụ ndị na-azụ ahịa. Ha dị njikere ịzụta, ha nwere mmefu ego, ma ha ghọtara na ị nwere ngwaahịa na ọrụ iji nyere aka dozie nsogbu ha. Oge a dị oke mkpa na njikarịcha ntụgharị gị na ntinye aka gị. Nke a bụkwa ebe teknụzụ nkwado ahịa nwere ike inyere aka rụọ ọrụ ma melite mgbanwe gị.
Metrik nke B2B Inbound Marketing Strategy
Enwere metrik enwere ike itinye n'ọrụ na ọkwa ọ bụla nke usoro azụmaahịa n'akụkụ ọ bụla na ntugharị ntụgharị.
Elu nke Fonel - Organic search traffic, organic keyword rankings, referral trafik, ugwo search traffic, ugwo search efu, ugwo search efu kwa click, direct traffic (nke na-agụnyekarị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ngwa ahịa), na organic na akwụ ụgwọ mgbasa ozi mgbasa ozi.
N'etiti nke Funnel - Lelee iji pịa oku na omume, lee ka ịpịrị peeji ọdịda ma pịa ntinye nrubeisi na peeji ọdịda ga-enye gị data iji bulie ma nwalee verbiage ọhụrụ, nhazi na ọdịnaya iji nyefee ntinye.
Botom fo Funnel - Dụga olu, ahịa ruru eru na-eduga, ahịa ruru eru na-eduga, na-eduga n'usoro ruru, atụmatụ iji mechie ngụkọta na mkpokọta ntụgharị oke na-atụle n'oge a na gafee ọkwa ọ bụla.
Tags: Analyticsb2b nyochaahịa b2bbofuala nke foneelukpọọ n’ọrụpịa akakabarede rurupịa iji tọghata rurupịa-site ọnụegontụgharị ntụgharịntughari ruructrkpọmkwem okporo ụzọndebanye ahadownloadsmbido peeji nkendu oluna-eduga na ruru ruruahia ruru eruetiti foneelumofuorganic isiokwu rankingsOkporo ụzọ ọchụchọ ahịaokporo ụzọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụakwụ ụgwọ ọchụchọugwo ugwo onu ahia obulaugwo nyocha ahiaakwụ ụgwọ mgbasa ozi mgbasa oziamaghị na-emechi ruruụzọ ntinye akandebanyesaịtị nyochaahịa ruru eruChọọ MarketingSocial Media Marketingtofuelu oluluele pịa ruru
Nov 27, 2014 na 10:19 PM
Ndewo Doug - Daalụ maka nke a! Anyị na-amalite, na-enyere obere ụlọ ọrụ aka ijikwa ahịa dijitalụ ha nke ọma. Ọtụtụ na-ejupụta site na ụzọ aghụghọ dị iche iche. Kedu ihe ị ga - ekwu bụ metrik kachasị mkpa maka obere azụmaahịa iji tụọ dịka ọ gbasara ahịa inbound? Enwere ụzọ iji mee ka ọ dị mfe maka ndị folks? Daalụ!